လမ်းဘေးခွေးတွေကို တန်ဖိုးကြီးခွေးအဖြစ် လိမ်ညာရောင်းချခဲ့တယ် လို့ တိုင်ကြားလာတာကြောင့် ပါကစ္စတန် မြို့တော် ကရာချိက ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ လူတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ ဆံပင် ညှပ်ဆရာ Sagheer ဆိုသူပါ။ တိုင်ကြားလာသူက သူဟာ အွန်လိုင်းအရောင်းအ၀ယ် ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ တန်ဖိုးကြီးခွေးတွေကိုတွေ့မိတဲ့အတွက် သဘောကျမိတာကြောင့်...
အနောက်ဘက်လွန်မင်း ပြည်မြို့ကိုသိမ်းသည့်အခါ ရှင်တစ်ဆူ နှင့် လူတစ်ယောက်သာရခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းသိကြမှာပါ။ လူတစ်ယောက် ဆိုသည်မှာ သခင်အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်အထိ သတ္တိရှိစွာကာကွယ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ငထင်ငယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်တစ်ဆူကတော့ ထိုခေတ်ထိုအခါက သီလသမာဓိဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံတဲ့ တောင်ဖီလာ ဆရာတော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောမှာတောင်ဖီလာ ဆရာတော်အကြောင်းပါ။
( ၃ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်၅၀၀တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ….
( ၃ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်၅၀၀တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ…. ကျပ်သိန်းတစ်သောင်း ကဟ-၇၄၈၇၂၁ ( ၃ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်၅၀၀တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ…. ကျပ်သိန်းငါးထောင် ကသ-၅၅၆၇၉၇ ( ၃ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်၅၀၀တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ…. ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် ခ-၃၀၆၁၈၀ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာဆုမဲစနစ်...
အမေရိကန် Philadelphia မြို့မှာ ဆရာဝန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခွဲစိတ်မွေးဖွားခြင်း တစ်ခုကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ လူဝံလေးကို မွေးဖွားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Philadelphia တိရစ္ဆာန်ရုံက အသက် ၁၇နှစ်ရှိတဲ့ Kira ဆိုတဲ့ လူဝံမကြီးဟာ ကလေးမီးဖွားရင်း ဒုက္ခရောက်နေတာကြောင့် လူ နဲ့ တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က...